Olee otú Bugharịa iPhone Photos na mpụga ike mbanye
"Olee otú m akpali iPhone photos na mpụga ike mbanye? M nwere karịa 5000 foto echekwara na m iPhone. Ugbu a, m mkpa onwe elu karịa ohere maka music na vidiyo, otú na nke a na m ga-zọpụta ndị a iPhone photos na mpụga ike mbanye. Biko nyere m aka. Ana m na-agba ọsọ Windows 7. " - Sophie
Mgbe azọpụta iPhone foto mpụga ike mbanye na-kwuru, ụfọdụ ndị ga-atụ aro ka ị jikọọ na ị iPhone na kọmputa ma na-iPhone photos si, na-etinye ha na-mpụga ike mbanye. Bụ eziokwu bụ na iPhone ike ga-eji dị ka a mpụga ike mbanye mbupụ foto na igwefoto Roll na kọmputa na mpụga ike mbanye. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa nyefee iPhone Photo Library, ọ ada ada. Iji na-niile iPhone photos na mpụga ike mbanye, i kwesịrị enyemaka ụfọdụ site na ụfọdụ ọkachamara ngwá ọrụ. Ndị na-esonụ bụ ihe atụ iji gosi gị otú ị ịzọpụta iPhone photos na mpụga ike mbanye.
Part 1. Nyefee gị mpụga ike mbanye ogologo na TunesGo Ochie.
Part 2. Nyefee foto site na IPhone na kọmputa mgbe ahụ ka mpụga ike mbanye
Nkebi nke 1: Nyefee foto site na IPhone ka mpụga ike mbanye ogologo na TunesGo Ochie
Wondershare TunesGo Ochie bụ ngwá ọrụ na anyị na-aga na-eji ndabere iPhone foto mpụga ike mbanye. Ọ iche version maka Windows na Mac. N'okpuru ebe m elekwasị anya na Windows version. Ị nwekwara ike gbalịa Wondershare TunesGo (Mac) on Mac. TuneGo Ochie, idetuo photos, music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes na gị PC maka ndabere.
Ma TuneGo Ochie na kachasị na-dakọtara na IPhone 3GS, IPhone 4, IPhone 4S, IPhone 5, IPhone 5c, IPhone 5S, IPhone 6 Plus, IPhone 6 na IPhone 6s Plus na IPhone 6s, ọ bụrụhaala na ha na-agba IOS 5, 6, 7, 8,9.
Download ntọlite ​​si njikọ n'okpuru
jikọọ gị IPhone na kọmputa
jikọọ gị mpụga ike mbanye na kọmputa, na-adabere operating software ị na-eji, n'ihi na windows ọ ga-eyi n'okpuru "My Computer" mgbe maka Mac Computers eriri mpụga ike mbanye ga-egosi na gị na desktọọpụ. Ugboro abụọ pịa TuneGo Ochie ka ọ na-agba ọsọ na kọmputa gị, mgbe ahụ, jikọọ gị IPhone gị na kọmputa site na iji IPhone USB na-abịa na ekwentị. Mgbe n'elu e mere nke ọma, TuneGo Ochie ga chọpụta gị IPhone na ọ ga-egosi na ya bụ isi nwaanyị di ya nwụrụ
jikọọ gị mpụga ike mbanye na kọmputa
na-eme ka n'aka na mpụga ike mbanye nwere ezu ebe nchekwa maka foto ị chọrọ nyefee. Dị ka a tupu mkpa, iṅomi gị flash nje virus iji chebe gị PC.
ndabere iPhone foto mpụga ike mbanye
Mgbe ekwentị gị na-egosi na window nke TunesGo Ochie, gị na mpụga ike mbanye na jikọọ na kọmputa gị, họrọ "Photos", nke bụ na ekpe nke TuneGo Ochie isi window. IPhones na-agba ọsọ iOS 5 ruo 9 ga-foto echekwara na nchekwa, "Igwefoto Roll" na "Photo Library". Na nke "Igwefoto Roll" na-echekwa photos na ị weghara iji ekwentị gị ka na "Photo Library" na-echekwa photos na ị ga-synced si iTunes, ma ọ bụrụ na i kere onye nchekwa na ekwentị gị, ha ga-egosi ebe a. Mgbe ị pịa ọ bụla nke na nchekwa (na e tụlere n'elu) na photos, photos na nchekwa ga-apụta. Ị nwere ike họrọ nchekwa ma ọ bụ foto na ị na-achọ nyefee gị mpụga ike mbanye, wee pịa "Export ka" nhọrọ nke anya n'elu mmanya. A mmapụta window ga-apụta, họrọ gị USB mpụga ike mbanye na pịa imeghe otú i nwere ike ịzọpụta photos na e nwere.
Part 2-1: Nyefee foto site na IPhone na kọmputa mgbe ahụ ka mpụga ike mbanye
ngwọta 1: Nyefee foto site na iPhone na kọmputa na iji email
Gaa photos ngwa na gị IPhone na ẹkedori ya.
Lee maka photos na ị chọrọ nyefee gị na kọmputa. Kpatụ họrọ button mere na ọ-enye gị ohere ịhọrọ ihe karịrị otu foto.
enweta na Share bọtịnụ. Otú ọ dị, ọ ga na-ekwe ka ị izipu ruo ise photos na oge. Na mmapụta elu mgbe ị họrọ òkè, họrọ "Mail" nke ga-akpali ndị mail ngwa na-emeghe a ọhụrụ ozi window na photos ị họrọ mmasị.
Tinye adreesị email na ndị dị otú ahụ na ị na-eziga photos onwe gị.
Nweta na akaụntụ email gị na kọmputa maka Gmail ọrụ, gị email ga-thumbnails nke oyiyi na ala nke ozi gị.
N'ihi na yahoo ọrụ, na-ekekọta download nhọrọ bụ na n'elu, ị nwere ike dị nnọọ pịa download niile Mgbakwụnye.
The image ga- ebudatara na echekwara n'okpuru gị Downloads nchekwa, nke bụ emi odude ke ekpe gị Windows Explorer.
ngwọta 2: Nyefee foto site na iPhone na kọmputa na iji iPhoto
Iji USB na-abịa na ekwentị, jikọọ iPhone gị Mac.
Ẹkedori iPhoto ngwa na gị Mac. on ekpe n'okpuru Ngwaọrụ ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ gị iPhone. Kpatụ họrọ button mere na ọ-enye gị ohere ịhọrọ ihe karịrị otu foto.
Họrọ photos na ị chọrọ mbubata ma ọ bụ ị nwere ike họrọ niile foto na vidiyo n'ime iPhoto n'ọbá akwụkwọ Na mmapụta elu mgbe ị họrọ òkè, họrọ "Mail" nke ga-akpali ndị mail ngwa na-emeghe a ọhụrụ ozi window na photos ị họrọ mmasị .
On Finder, họrọ Dezie, Tapawa XX Ihe, mgbe ahụ, mado foto na / ma ọ bụ vidiyo ị dị ka ike mbanye nke gị Mac.
Part 2-2: Ma mgbe nyefee foto site na PC gị mpụga ike mbanye
Jikọọ gị mpụga ike mbanye gị na kọmputa n'ịhụ na mpụga ike mbanye nwere ohere nke foto na ị chọrọ mbubata.
Họrọ foto na ị dị si IPhone gị PC na ekpe n'okpuru Ngwaọrụ ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ gị iPhone. Kpatụ họrọ button mere na ọ-enye gị ohere ịhọrọ ihe karịrị otu foto.
Right pịa ma họrọ otu, Na mmapụta elu mgbe ị họrọ òkè, họrọ "Mail" nke ga-akpali ndị mail ngwa na-emeghe a ọhụrụ ozi window na photos ị họrọ mmasị.
Emeghe gị mpụga ike mbanye. Right pịa na-acha ọcha akụkụ nke window na họrọ mado mbubata niile foto na ị depụtaghachiri site na PC gị
Na-ekiri ndị Video ka Bugharịa iPhone Photos na mpụga ike mbanye
Chọrọ nweta nkwalite ka iOS 8? Ị nwere ike mmasị na
5 ihe na-eme tupu iOS 8 ọjọọ
Free Up Space maka iOS 8 ọjọọ
4 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPhone na ma ọ bụ na-enweghị iTunes
A Full Guide Wụnye iOS 8 ka iPhone
Nzọụkwụ ka ịnyefe ọdịnaya si gam akporo ka iPhone
Olee otú Hichapụ All / oyiri Ndi ana-akpo si gị iPhone
Esi rụọ ọrụ iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5
> Resource> iPhone> Olee otú iji Bugharịa iPhone Photos na mpụga ike mbanye